Wire Alloy Silver, Rivet Mifandray, Soso-kevitra Mifandraisa - ZHJ
Dingana famokarana sy fampandrosoana
hazakazaka mpanamory injeniera
Alefaso ny mpanjifa
ny servies anay
ZHJ dia orinasa hi-tech drafitra fanilo nasionaly eo amin'ny sehatry ny fitaovana fifandraisana.
Miezaha hampifaly ny mpanjifanay
SHZHJ dia afaka mamokatra amin'ny tariby sy ny tadin'ny volafotsy, mba hahafahantsika manatsara sy manitsy ny fizotran'ny fitaovana arakaraka ny takian'ny mpanjifa. SHZHJ 100% manamarina ireo vokatra alohan'ny hivoahan'ny orinasa misy anay, ary manana mari-pankasitrahana isaky ny fandefasana izahay.
Fiaraha-miasa teknolojia tsy manam-paharoa
Ny serivisinay dia miainga amin'ny fanodinana vy sarobidy amin'ny alàlan'ny haitao fanaovana stamping ka hatramin'ny fivoriambe vita amin'ny plastika. Mifanaraka amin'ny teny filamatra hoe "Tava iray ho an'ny mpanjifa", mampihena ny interface amin'ny mpamatsy izahay ary mamorona vahaolana avo lenta sy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Fahalalana ara-nofo miavaka
Rehefa miaraka ny vy sy ny herinaratra dia manome ny mpanjifanay fahaizana manokana momba ny akora, ny velarana ary ny fanodinana azy ireo bebe kokoa. Ity no fomba namoronana vahaolana azo antoka avy amin'ny orinasa SHZHJ nandritra ny 10 taona mahery.
Shanghai ZHJ Technologies Co., Ltd. dia naorina tamin'ny taona 2007, hatrany am-piandohana: SHZHJ, FOKUSANA MATERIAL CONTACT! ZHJ dia orinasa hi-tech drafitra fanilo nasionaly eo amin'ny sehatry ny fitaovana fifandraisana. ZHJ dia manolo-tena amin'ny fampiasana siansa maoderina sy teknolojia maoderina hamahana ny olana amin'ny fitaovam-pifandraisana, ny vokatra lehibe ZHJ dia misy tariby misy alimo volafotsy enina andiany, rivet mifandraika, tendron'ny fifandraisana, bokotra contact, contact Assembly ary Tungsten Contact, amin'ny alàlan'ny zavatra niainantsika tamin'ny metaly sarobidy fanodinana mandritra ny 20 taona mahery sy ny fahalalantsika malalaka amin'ny fitondrana fifandraisana elektrika ankehitriny. Mpiara-miasa amin'ny safidy ho an'ny orinasa maro izahay amin'ny indostria sy amin'ny ankamaroan'ny faritra an-tsena.